Akhriso Fariimo Jacayl oo Romantic ah: u Dir Jacaylkaaga iyo Qofka aad aduunka Ugu jeceshahay | SOMALI SUN |
Akhriso Fariimo Jacayl oo Romantic ah: u Dir Jacaylkaaga iyo Qofka aad aduunka Ugu jeceshahay
Sep 29, 2017 - Aragtiyood
Marnaba ma iloobi karo kulaylka gacantaada . Waxaan doonayaa inaan dareemo maalin kasta iyo habeen kasta. Sababtoo ah maalinkii ugu horeeyay ee aan kujeclaaday waxaan dareemay inaad tahay Qof Buuxin kara noloshayda.
Waxaan ka fekerayay sidaan kugula hadli karo seddex erey. Kadibna waxaan helay hab. “Anigu” aad ayaan ugu faraxsanahay adiga. “Jacayl” waa mid qurux badan. “Adiga” waa igu filantahay nolosheyda. Haddaba ku biir ereyada hore ee jumladaha. oo hal mid kala bax.
Sidee baan kuu sharxi karaa dareenadayda. Xanuunka, kabuubyadiisa, kaliya waxaan ku caafimaadi karaa waa adiga, haddii aad markasta noqoto qof Agtayda joogo waxaan ka caafimaadi doona xanuunka i haya.
Guul kasta, dhamaan guulaha, qaderkeyga, jacaylka, dareenka oo dhan waa uun adiga, haddii aan ka agtago waxa bur buriya dhammaan noloshayda.
Jacaylku maaha wax miyir leh. Waxyaabaha ay ka mid yihiin ficil celinta. Waad qososhaa oo waad ooyeysaa sabab la’aan.
Jacaylku maaha waxa aad filayso. Ma aha sariirta ubax, ma aha koob shaah ah, waa waddo ay ka buuxaan qodax iyo dab oo dab ah.
Markii aan soo bandhigay dareenka jacaylka, wax waliba way qurux badan yihiin, waxaanan ku dhacay jacayl kasta.
Fadlan Lasoco Dhammaan Qoraalada Jacaylka ee Warbaahinta Somalisun.net, waana taxane.